Ny zavatra rehetra momba ny Trenbolone Enanthate Powder | AASraw
/Blog/Gallery/Ny zavatra rehetra momba ny Trenbolone Enanthate Powder
Posted on 02 / 20 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Mieritreritra ve ianao hampiditra steroids mahery amin'ny fitondrantenan'ny vatanao? Eny, ny vovoka Trenbolone enanthate dia mety ho lalana handehanana. Diniho ny lafiny mahakasika ny zava-mahadomelina, ny tombontsoa, ​​ny fiantraikany, ary ny fomba hividianana azy.
Trenbolone Enanthate tantara
Tamin'ny voalohany, Trenbolone dia fanafody fitsaboana vohoka mba hanatsarana ny fanatanjahan-tena amin'ny omby. Izy io dia niandoha voalohany tamin'ny taona 60 tamin'ny alàlan'ny orinasa Alemana, Hoechst-Roussel. Ny mpamokatra no nametraka ny vokatra avy amin'ny veterinarian, Finajet. Nandritra izany fotoana izany, ny vovo-dronono Trenbolone dia nikaroka fikarohana tany Los Angeles tao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia.
Ity traikefa an-dalambon'i Tren Ace any Alemana ity dia nahazo laza nandritra ny fotoana kelikely mandra-pikatony azy tamin'ny faran'ny 80. Herintaona taty aoriana, nisy orinasa mpamokatra herinaratra iray hafa tany Frantsa tonga niaraka tamin'ny trenbolone hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) an'ny kliobana ambanin'ny anarana hoe Negma. Indrisy anefa fa tsy ara-dalàna ihany koa io tamin'ny 1997.
Farany, ny tranbolone Trenbolone dia niseho tamin'ny fipoahana ho toy ny vokatra tsy miankina amin'ny 2004 miaraka amin'ny marika marika, trenabol. Ny British Dragon Company dia namorona ny steroid ho toy ny vokatra laboratoara ambanin'ny tany. Na dia tsy nanao raharaham-barotra tao amin'ny 2006 aza ny orinasa, mbola misy ihany ny marika ao amin'ny tsena mainty.
Raha toa ny Tren A dia indroa toy ny pharma sy vet medication, Tren E ary Parabolan dia tsotra amin'ny fampiasan'ny olona.
Inona no atao hoe Trenbolone Enanthate Powder?
Trenbolone enanthate dia famintinana synthetic amin'ny CAS no 10161-35-8. Fanangon-karena, izay mampiseho ny toetra anabolika sy ny androgenic. Ny treninina E dia ny Estera enanthate C17β, ary avy amin'ny nandrolone (19-nortestosterone).
Tahaka an'i Deca Durabolin, ny Tren dia tsy misy atomaatoa karbona ao amin'ny toerana 19th. Na izany aza, ny rafitra tokana ao amin'ny fitambarana dia maneho fifamatorana karbôna roa na eo amin'ny toerana 9th sy 11th.
Misy karazana Trenbolone telo amidy, ary hanazava ny maha samihafa azy ireo. Ny fananan-tany ao anatin'ireny fitambarana ireny dia ny fametrahana chimique sy hormona. Na izany aza, dia ny fiononan'ny ester iray izay milaza azy ireo manavaka.
Estera dia mifehy ny famoahana ny hormone Trenbolone ao amin'ny vatana. Fampitahana vetivety teo trenbolone acetate Ary ny estershate ester dia maneho fa ity farany dia manana halaviran-dàlana lava kokoa ary miasa miadana kokoa noho ny teo aloha. Ho an'ny Tren E, ny esanthate ester dia ao amin'ny vondrona 17-beta-hydroxyl ao amin'ny rafitra. Fomba hafa koa ny basilona Trenbolone, na dia tsy ampy aza izy io.
Ny fampiasana voalohany ny voly tranon-tsoloka Trenbolone dia ny famokarana steroids anabolic. Azo itokisana izy io ary avo dimy heny noho ny testosterone. Amin'ny ankapobeny, midika izany fa raha ny 200mg amin'ny Tren E ihany no ampiasainao, ny vokatra sy ny valiny dia hihaona amin'ny mpampiasa iray hafa izay nandany 1000mg amin'ny testosterone
Andriamatoa Tononkalo 500 100
Ireo steroïde roa dia saika mitovy, saingy ny fahasamihafana dia tonga amin'ny resaka heriny sy ny haingam-pandeha. Ny haavon-tsakafo sy ny saran-dalan'ny Tren A dia haingana kokoa noho ny fifandraisany, noho izany, ny antsasakadiny kokoa ny karôlônina tranainy. Noho izany antony izany, ny vatanao dia handefa valiny tsikelikely amin'ny valan-tsolika azo tsapain-tanana amin'ny trangan-tsolika.
Ny tombontsoa voalohany amin'ny Tren E dia tsy dia misy fiantraikany miavaka. Raha toa ka tsy manana toerana marefo amin'ny sigara ilaina ianao, dia izao no fomba handehanana. Raha ny marina, dia indroa isan-kerinandro ny dosage raha toa kosa ny Tren Ace dia mitaky fampidiran-drivotra isan-andro isan'andro.
Ny tranolnana tranbolona dia tsara indrindra ho an'ny taovam-pandevonan-kanôzôneo efa hatramin'ny ela, satria mety ho sarotra ny hihazona na hampiato ny tahan'ny ra. Tena tsara ho an'ireo mamonjy fivadibadrana.
Inona no atao hoe Trenbolone Enanthate Powder ampiasaina?
Trenbolone vovoka no singa fototra amin'ny famokarana ny tranbolone enanthate injection. Ny vatana simika dia ampiasaina amin'ny fitsaboana.
Tren E dia milina amin'ny fanorenana ny ratra, manatsara ny vatan'olombelona, ​​ary manatsara ny fahombiazan'ny bodybuilders na atleta. Miaraka amin'ny steroid, dia afaka mampitombo ny masin'ny voina ianao nefa tsy mahazo ny vatana mangatsiaka tsy ilaina. Farafaharatsiny, anisan'ireo zava-mahadomelina vitsivitsy izay azonao atao ny misintona mandritra ny dingam-pamokarana.
Ankoatra ny maha-designer steroid, ny Pulco Trenbolone E dia singa manan-danja izay ampiasain'ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana amin'ny fikarohana siantifika. Manana sanda ara-pahasalamana sasantsasany izy, indrindra rehefa miala amin'ny zava-mahadomelina, izay afaka mitodika amin'ny fihisatry ny hozatra amin'ireo marary zokiolona.
Ahoana ny fiasan'ny Trenbolone enanthate?
Ny fanaintainana sy ny metabolismin'ny tranbolone enanthate dia mitranga ao anaty atiny. Ny zava-mahadomelina dia manana fiantraikany goavana ho an'ny sela receptor androgen, izay tompon'andraikitra amin'ny toetra amam-behivavy lahy faharoa. Noho ny tsy fambolena ao amin'ny estrogen, ny steroid dia mitarika hozatra amin'ny tebiteby.
Ny fisian'ny Tren E ao amin'ny vatana dia mampitombo ny fihenan'ny ion amônôma amin'ny hozany sy ny fanatsarana ny proteinina. Na dia eo aza ny fiasana amin'ny vatan'ny muscular, ity steroid ity dia mandrisika ny fahakiviana ary mampihena ny taham-pahavitrihana na ny fepetra amin'ny hozatra. Ankoatra ny fifamatorana ao amin'ny AR, ilay fitambarana koa dia mifandray amin'ny sela matavy, noho izany, manamora ny lipolysis.
Na dia eo amin'ny voa aza, ny train dia tsy mametraka endrika fanovàna ary tsy manimba azy io. Noho izany antony izany dia tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny rafitra urine ny fanafody. Ny fanonerana dia avy amin'ny urine.
Trenbolone Enanthate Half fiainana
Ity hatreny ambany ity dia manana halavàna eo anelanelan'ny 8 ka hatramin'ny 12 andro. Amin'ny maha-ety ela, ny Trenbolone Enanthate dia mihetsika tsikelikely amin'ny vatany miaraka amin'ny tahan'ny fihenana tsikelikely. Noho izany dia mitoetra ao anatin'ny rafitra ataon'ny olombelona izy roa andro mialoha ny famotsorana azy.
Mandra-paharitra ve ny mijanona ao amin'ny rafitra?
Raha fantatrao ny antsasaky ny steroide anabolic, dia lasa mora ny maminavina ny habetsahan'ny fotoana hijanonana ao amin'ny rafi-pitsaboana. Ity vanim-potoana ity dia fantatra ihany koa amin'ny vanim-potoana fahitana.
Rehefa manao test fanandramana ianao, ny Trenbolone Enanthate dia hiseho dimy volana aorian'ny nandaozanao ny fiaramanidina. Ny antony dia ny fisian'ny metabolisma eo amin'ny paikady. Ankoatra izany, ny zava-misy dia ahitana endri-tsolika lava ary mampidiran-javatra amin'ny fahatarana ao amin'ny rà.
Raha maka fitsapana fitrandrahana aorian'ny dimy volana ianao dia ho ratsy ny ohatra. Na izany aza, tokony ho tadidinao fa ny steroids hafa izay hapetraka eo amin'ny fiarandalamby dia hisy fiantraikany amin'ny fotoana hitadiavana. Amin'izao fotoana izao, tsy misy ny doping amin'ny atleta matihanina momba ny fampiasana ny Trenbolone.
Inona avy ireo tombontsoa azo amin'ny tranombola?
Ny tsiambaratelon'ny tombontsoa avy amin'ny anabolic steroids dia amin'ny fanarahana ny fepetra fisorohana. Tokony hahatakatra sy handanjalanja ireo loza mety hitranga alohan'ny hanombohana ny tsingerina. To enjoy the trenbolone enanthate beneficiens, ataovy azo antoka fa miasa tsy tapaka raha mihinana sakafo tsy misy kaloria ianao.
Ireto ny zavatra andrasana amin'ny rail:
Ny fampidirana proteinina dia mitovy amin'ny habetsaky ny hozatra ao amin'ny vatana. Ny tanjany dia ny hozatra kokoa azonao anaovana azy. Ankoatra izany, proteinina miaro ny vatana efa misy ary manalefaka ny fanarenana indray.
Noho ny toetra androgenic avo lenta amin'ity steroid ity, ny vatanao dia hamaly ny fitomboan'ny hantsana.
-Mitombo ny fiaretana
Manatsara ny isan'ny sela mena ny Trenbolone, ka mahatonga azy ireo ho afaka hitondra sakafo sy oksizenina hafa. Ny oksizenina farafahakeliny dia mitovy amin'ny haavon'ny angovo avo.
Rehefa manandratra ny mavesa-danja ianao na manao fanatanjahan-tena lehibe, dia tsy hitafy ny tenanao ianao. Ny vatany dia hamerina indray ary hiantoka ny fiaretana sy ny faharetana farany.
-Manatsara hery sy fahombiazana
Amin'ny faran'ny herinandro telo ka hatramin'ny efatra ao amin'ny sikola trenbolone, aoka ho azo antoka ny fisoratana anarana fitomboan'ny tanjaka. Ny antony dia mampitombo ny herinao ny fitsaboana, mampihena ny fotoana fanarenana, ary manatsara ny fiaretana. Ireo Powerlifters dia azo antoka fa handeha ho adala io tombontsoa io.
-Mitarika amin'ny fihazonana azota
Ny nitroka dia manohana sy mampiroborobo ny anabolisma, noho izany, ny fanombohana ny famafazana proteinina ao amin'ny hozatra. Io dingana io dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny hozatra. Ankoatra izany, raha manomboka amin'ny fanjakana ny anabolika, dia manakana ny fanavakavahana sy ny lafy ratsiny ny fitsaboana.
Ny tebitinan'ny muscle dia ahitana 16% ny azôty. Raha mbola mitazona izany lanjany izany ianao, dia hitoetra ho anabolika.
Trenbolone Enanthate dia anisan'ireo steroids anabolic vitsivitsy, izay tsy aromazizina amin'ny estrogen. Noho izany, dia tsy dia zakanao loatra ny toetra mampiavaka ny vehivavy rehefa eo.
Ny mahatonga ny steroïde hivadika ho estrogen mora dia ny fisian'ny atoma atomika karbona ao amin'ny toerana 19th. Ho an'ny 19-nortestosterone, ny hydrogen dia manolo ny atôma karbona.
Ao anatin'ny dingana iray monja dia afaka manakaiky ny £ 20 ianao. Tsy toy ny ankamaroan'ny steroïde ny vokatra azo avy amin'ny lanjan'ny rano, ny tantsaha E dia mampitombo ny fitomboan'ny taovam-pandehanana ary mandrotsaka ny tavy fanampiny.
Ny steroid dia manosika ny fitomboan'ny fitomboan'ny tosidra-1 (IGF-1). Io hormone proteinina io dia miasa mba hamerenana indray ny vatana ary hampihetsika ireo sela, havandra, tebiteby, kodiarana, ary taolana.
Raha toa ianao ka eo am-panaovana azy, ny zavatra farany tianao hanangonana dia ny fatin-doko. Ny glucocorticoids dia manatsara ny fitomboan'ny taovam-pisefoana ary mampitombo ny tombom-barotra. Ny Trenbolone E dia mihetsika amin'ny fametahana ny kortisol.
Noho ny fitomboan'ny rà mandriaka, ny vatanao dia afaka mampitombo ny sakafo rehetra ilainao, tsy mitovy amin'ny fomba nanaovana azy teo aloha teo amin'ny tsindrona. Farafahakeliny, ny vatanao dia afaka mitahiry na dia ny milina faran'izay kely indrindra amin'ny proteinina, vitamins, ny matavy, ary ny voambolanao aza.
Ny tsimok'aretina mahavelona dia iray amin'ireo tombontsoa manan-kery eo amin'ny trenbolone izay mavesa-danja hafa amin'ny steroids hafa.
-Fitaovam-potoana kely kely
Miaraka amin'ny Tren E ianao, dia hampihetsi-po ny hozatra roa monja amin'ny herinandro ianao. Eny, ity vaovao ity dia vaovao mahafaly ho an'ireo lehilahy mahafatifaty.
-Tsy misy poizina amin'ny leviora
Ny ankamaroany, ny steroids amin'ny anabolic oral dia miahy ny hepatoxicity. Ny maha-zava-mahadomelina tsy azo ampiasaina, ny Trenbolone dia tsy hivoatra amin'ny aty mandritra ny pharmacokinetics. Raha toa ianao ka manana olana amin'ny aty amin'ny aty amin'ny seranam-piaramanidina, dia tokony hanome tsiny ireo stéride stacks ianao.
Raha tsy azonao antoka ny zavatra andrasana amin'ny fiarandalamby mandritra ny famoahana famaranana, jereo izao ny antsipiriany. Trenabol dia hanampy anao handoro ny tavy sy ny kaloria fanampiny. Amin'ny ankapobeny, mety ho very eo akaikin'ny 1% ny lanjan'ny vatanao aorian'ny dingana.
-Mampihena ny fotoana fanarenana
Miaraka amin'ny Tren E, afaka manao fiofanana mahery vaika ianao nefa mbola mahazo hery hatrany hanohy.
A typical Trenbolone cycle dia maharitra hatramin'ny valo herinandro, fa afaka mampiasa herinandro 12 kosa ny mpampiasa misimisy. Ny tena mahavariana ny tranolnana Trenbolone dia ny ahafahanao maka azy amin'ny AAS hafa. Azonao atao ny mampifandanja ny voka-dratsiny mba hanamaivanana ny fiantraikany eo amin'ny vatana ary hampitombo ny fahombiazan'ny steroid.
Ataovy azo antoka ny hampiditra testosterone amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana sy ny fizarana fizarana satria manampy amin'ny fandanjana ny hormonina testosterone voajanahary ao amin'ny vatany mandritra ny PCT. Ho an'ireo mpampiasa efa ela, ny fanesorana an'i Dianabol na ny Anadrol dia hanana fiantraikany tsara eo amin'ny vokatrao. Na izany aza, ataovy azo antoka ny fetran'ny aretin-tsolika azonao ampiasaina mba tsy hahatonga anao hiharatsy ny vokany.
Raha mikopakopaka ao anatin'ny fiarandalin'ny Tren E ianao, dia manoro an'i Primobolan, Masteron, ary Halotestin aho. Winstrol, testosterone enanthate powder, ary i Anavar dia miorina tsara amin'ny fiarandalamby.
Any amin'ny fiafaran'ny tranoben'ny Trenbolone, tokony hanokana ny herinandro ho avy ianao amin'ny fitsaboana amin'ny alina (PCT). Ny tsy fahombiazan'ny fanaovana izany dia tsy maintsy hanamaivana ny haavon'ny testosterone, mitombo ny fahaketrahana, ary mbola ratsy kokoa hatrany, very ny masin'ny voina. Ny sasantsasany amin'ny fitsaboana PCT hodinihina dia ny Nolvadex sy Clomid.
Ity misy ohatra iray amin'ny serasera serasera tranbolone enanthate miaraka amin'ny sehatr'asa manan-danja;
The Phase Cutting
Week Trenbolone Enanthate testosterone Enanthate Winstrol
1-7 400mg / herinandro 750mg / herinandro -
8-12 400mg / herinandro 750mg / herinandro 50mg / eod (isaky ny andro hafa)
The Phase Bulking
Week Trenbolone Enanthate Testosterone Propionate Primobolan
1-10 400mg / herinandro 200mg / eod 600mg / herinandro
Week Trenbolone Enanthate testosterone Enanthate Anavar Primobolan
1-10 400mg / herinandro 1000mg / herinandro 90mg / herinandro 600mg / herinandro
11-12 - 1000mg / herinandro 90mg / herinandro -
13-14 - - 90mg / herinandro -
Vantany vao vita ny fifindran'ny Trenbolone enanthate, ataovy izay hahazoana 50mg of Clomid isan'andro. Tokony hanohy ny doka ianao amin'ny andro 21 manaraka. Ampiasao koa ny 20 - 40mg amin'ny Nolvadex mandritra ny folo andro.
Azo ampiasaina amin'ny endri-tsoratra ny tranofilanana Trenbolone. Ny dosol dosil Trenbolone dia miorina eo anelanelan'ny 75mg mankany 100mg, izay tokony haka indroa isan-kerinandro ianao amin'ny alalan'ny gluteal na fihenan-tsinahy. Ity fihetsika ity dia midika fa ny dosia isan-kerinandro dia mianjera amin'ny 150mg mankany 200mg.
Ho an'ny intermediate dia azonao atao ny manelanelana 200 - 400mg / herinandro, na inona na inona ny tanjona kendrenao, manaparitaka na mahazo tanjaka.
Na dia hiasa ho majika aza ny 75 - 100mg, dia afaka mandray betsaka tahaka ny 400mg amin'ny doka tokana ny mpampiasa. Raha mihoatra lavitra noho io sanda io ny dosage, dia tsy hisy intsony ny valim-panafahana tranbolone. Na izany aza, amin'ny faran'ity rehetra ity, ianao dia tsy maintsy mahazo na dia amin'ny fiantraikany ratsy aza.
Tren E vovoka dia tsy azo ekena amin'ny fampiasana vehivavy. Ny antony dia ny dokotera dia mampiseho ny endriny mahery vaika amin'ny endriny, izay mety tsy hiteraka tsara amin'ny balan'ny hormonal vavy. Raiso, ohatra; Ny virilization dia mety hitranga miaraka amin'ireo marika toy ny clitoris tendrontany.
Ity zava-mahadomelina ity dia mahomby ho an'ny mpikamabana sy ny mpampiasa steroid. Indraindray dia avo dimy heny noho ny testosterone, ny Trenbolone dia tena tsara ho an'ny bodybuilders mafy. Raha manomboka ianao, dia tokony hijery ireo tranga miavaka Aasraw serasera
Ny vokatry ny steroids bodybuilding dia miankina amin'ny anton-javatra vitsivitsy. Ohatra, ny habetsahan'ny dosage dia ny soritr'aretina kokoa ny vatanao. Ankoatra izany, tsy mitovy ny olona. Ny hena iray dia mety poizina iray hafa, fantatrao.
Ny tsy fahitan-tory sy ny torimaso momba ny torimaso
Fampitomboana ny tsindrimandry
Mafy ny hatsembohana amin'ny alina
Toe-karazany ambany amin'ny testosterone
Ny fivelaran'ny prostate (hyperplasia malemy)
Ny tsy fanarahan-dalàna cholesterol
Zava-mitranga tsy ara-dalàna
Ny risika amin'ny gynecomastia noho ny prolactine
Ahoana no ialana Trenbolone Enanthate Side Effects
Ny sasany amin'ireo voatanisa eo ambany sehatra trenbolone dia azo atao tsara. Raiso, ohatra, raha toa ianao ka mora tohina amin'ny toetra androgenic toy ny aknadia na ny baldness ny lahy, dia tokony hesorina tsy haka ny steroid.
Rehefa mahatsapa fatiantoka mafy dia mafy, misotro rano be loatra mba hitazonana ny tenanao ho maina. Any amin'ny fiafaran'ny fiarandalamby fifamoivoizana, aoka ho azo antoka fa hanana PCT mba hanomboka hanomboka ny level of testosterone.
Raha te haka toerana any an-tokantrano bebe kokoa, ny testosterone dia tokony ho ampahany sy tapany amin'ny paozinao. Ny antony dia ny term Trenbolone per se dia hampitsahatra ny fanakanana ny vokatra voajanahary amin'ny testosterone.
Aiza no hividianako fitsaboana amin'ny fandeferana?
Raha vao manomboka amin'ny fambolena biriky ianao, dia angamba ny fanontaniana voalohany, "Aiza no mety hividianako steroïde ho an'ny fambolena rehefa tsy ara-dalàna?"
Manaova fofona lalina ary vakio mialoha, satria nampangetaheta ny ankamantatra izahay.
-Buying Trenbolone Enanthate
Amin'ny ankamaroan'ny fanjakana dia tsy ara-dalàna ny tranbolona mividy sy ny vokatr'izany. Ny famokarana sy ny fividianana ny steroid dia tsy azo ampiharina amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana. Noho izany, raha te-hibaiko ny sasany ho an'ny fitondrana kônôdôgy ianao, dia tsy maintsy mampiasa ny tsena mainty.
Tany Etazonia, ohatra, ny FDA dia nisintona ny fametahana ny famokarana, ny fampiasana ary ny tompon'ny fiaramanidina. Hatramin'io faneriterena io dia azonao an-tsaina fa tsy misy orinasa pharmaceutique any Etazonia manana fankatoavana FDA amin'ny fananganana ity steroid ity. Na izany aza, raha tsy maintsy manajanona ny fanafarana ara-dalàna ianao, ataovy izay hahazoana antoka fa tena mpitsabo vady na mpikaroka siantifika.
Na dia tsy ara-dalàna aza ny Tren E ao Etazonia, Angletera, Aostralia, ary Kanada, ny ankamaroan'ny firenena ao Afovoany Atsinanana sy Afrika dia tsy nanome tsiny ny fampiharana azy io. Ao Kanada, dia zava-mahadomelina IV ao amin'ny Act Act. Afaka manararaotra izany tombontsoa izany ianao ary hikaroka mpaninjara solika trenbolone toy ny www.aasraw.com.
Tsy toy ireo variana roa trenbolon hafa, ny Tren E dia tena sarotra ny mahita. Na izany aza dia azonao atao ihany koa ny misafidy ny orinasam-panjakana iray na loharano ny steroid avy amin'ny mpamatsy gym eto an-toerana. Na izany na tsy izany, aoka ho azo antoka ny fanandramana ny loharano niaviany ka tsy ho lany tamingana ny vokatra hosoka sy tsy misy sakantsakana.
Ny vidin'ny Trenbolone enanthate dia miankina amin'ny antony maromaro. Ohatra, ny fividianana avy amin'ny mpamatsy gym eto an-toerana dia mety ho lafo kokoa noho ny fividianana mivantana avy amin'ny magazay an-tserasera. Ankoatr'izay, manana ny mari-pamantarana ny mpanafika tsirairay.
Raha oharina amin'ny ambaratongam-pahefana, ny saribao 10ml amin'ny Tren E dia mitentina eo amin'ny $ 75 sy $ 130 ho an'ny 200mg.
Ny steroïde for sale dia sarotra ho avy, noho ny lalàna FDA mafy. Raha toa ianao ka novokarin'ny mpiasan'ny fambolena, dia tsy tokony hatoky ny laboratoara ambanin'ny tany rehetra ianao raha mitaky ny famokarana Tren tsara. Tsy te hampidi-doza ny fiainanao ianao raha mieritreritra fa ny sasany dia mamokatra ny vondrona misy azy ireo amin'ny fanaraha-mason'ny kalitao ary tsy misy fitsipika.
Ny fanontaniana manaraka ao an-tsainao dia tokony ho izao, "Aiza no hividianako fitsaboana steroid ho an'ny taova?" Eny, hanazava aho. Fivarotana iray amin'ny aterineto dia mety satria mamonjy ny fotoananao sy ny volany.
Ataovy azo antoka fa hampitaha ny vidin-tsolika Trenbolone eo amin'ny mpivarotra samihafa, jereo ny valin-kevitry ny mpamatsy, ary ny fandefasana fitaterana. Ankoatr'izany, ny tranonkala dia tokony hanome fanazavana feno momba ny Tren E. Ity fampahalalana ity dia ahitana ny tombontsoa, ​​ny trôbolon, ny dosage, ary ny fomba fitantanana ny vokatra hafa.
Na dia azonao atao aza ny mividy entana voaomana ho anao, dia mbola afaka mividy ny kitapom-bary Tren E ianao ary tonga amin'ny faniriana tianao. Ity fomba fampianarana ity dia tsy sarotra ihany fa koa fomba tsara indrindra hampidirana ny dosilinao tranbolona.
Ho an'ny 100ml amin'ny 100mg / ml dia mila;
10g (7.5ml) avy amin'ny Trenbolone E poids
Ben'ny tanàna Benzyate 10ml (10%)
2ml an'ny alkohol benzyl (2%)
80.5ml misy tsiranoka, sesame, na menaka voanio
Ho an'ny 100ml amin'ny 200mg / ml, mitaky;
20g (15ml) avy amin'ny Trenbolone E poids
Ben'ny tanàna Benzyate 15ml (15%)
Ny menaka 68ml (sesame, grapeseed, na menaka voanio)
Trenbolone Enanthate dia anisan'ireo mahery vitsy anabolic steroids for sale ao amin'ny indostrian'ny bozaka. Ny fiheverana fa avo dimy heny mahery noho ny testosterone dia midika fa ny tsy fahampian-tsakafo dia vehivavy. Ampiasao tsara izany raha toa ianao ka manana mpampiasa steroid za-draharaha.
Eo am-piheverana fa an-tapitrisany lava be izy io, ataovy azo antoka fa ampiasaina izany rehefa mandeha ny fotoana lava. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny azonao ampiasaina miaraka amin'ny steroide anabolic mba hahazoana tanjona samihafa. Te-hahazo tanjaka ianao, manangona na manapaka ny lanjanao; Ny Tren E dia hanao.
Manontany tena ve ianao hoe nahoana ny poezia Trenbolone E no miteraka ho "hentitra" steroid anabolic? Eny, satria ny antsasa-manilika dia manana halaviran-dava lava ary hijanona ao amin'ny rafitra mandritra ny fotoana lava alohan'ny famonoana. Na dia misy olana goavana aza, ny mpampiasa dia hanakana ny doka, saingy mbola hihoatra ny roa herinandro manaraka ny vokany.
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny 2018
Rao Isotretinoin (Accutane) ho an'ny akne: Fikarakarana ny akne miaraka amin'ny Isotretinoina Ny Steroids Strongest Oral Methasterone (Superdrol) Prohormone